Contact | Danya Wadi
UN Envoy Tells Myanmar’s Rakhine State Not to Ignore Rohingya Plight
By danyawadi January 10, 2015 Leaveacomment
By Radio Free Asia January 10, 2015 Protesters display banners ahead of the arrival of UN Special Rapporteur on Myanmar Yanghee Lee in western Rakhine state, Jan. 8, 2015. (Photo: AFP) The U.N.’s human rights envoy for Myanmar asked the authorities in volatile Rakhine state on Friday not to ignore the plight of minority Rohingya […]
By danyawadi May 4, 2014 Leaveacomment
Updated: May 26, 2009 Introduction Leadership can be defined as one’s ability to get others to willingly follow. Every organization needs leaders at every level. Leaders can be found and nurtured if you look for the following character traits. A leader with vision hasaclear, vivid picture of where to go, as well as […]
Contact here: သတင်းများ ပေးပို့လိုပါက ဆက် သွယ် ရန်
By danyawadi May 21, 2013 Leaveacomment
Contact here: သတင်းများ ပေးပို့လိုပါက ဆက် သွယ် ရန် အရေးပေါ်သတင်းများကိုစီစစ်၍ဦးစားပေးတင်ပါသည်။မိမိပို့သောအီးမေးလ်တွင် attch ဖိုင်ပါမပါ စစ်ဆေးပါ။အချို့မေးလ်တွင်attch ဖိုင်မပါ လာ ၍ တင်မပေးနိုင်ပါ။ဖုန်းနံပါတ်ပေး၍ခေါ်ခိုင်းခြင်းသည်းခံပါ။ မိမိသတင်းကို အဆင်အသင့် တင်နိုင်အောင် သတင်းကိုတည်းဖြတ်ပြိးပို့ပါ။အချို့သော သတင်းများ ပေးပို့ရာတွင်စာရှည်လျား အဓိက ဘာကို ဆို လိုသည် မသိနိုင် စာ များကို အခက်ခဲ အမျိုးမျိုးကြောင်း မတင်ဘဲ ချန်ထားပါကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်။ xxxxxxxxxxxxx အချို့အထောက်အထားများဆိုဒ်ထဲ၌တင်ထားပြီးဖြစ်လျှင်ပိုစ်မဖေါင်းပွားရန်ချန်လှပ်ထားပါသည်။ xxxxxxxxxxxxx မိမိတို့ အနေဖြင့် သမိုင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ဓါတ်ပုံ၊အခြားအထောက်အထား၊ သတင်းအမှန်ကို Contact : danyawadi9@gmail.com သို့ပေး ပို့ပါ က ဤ ဆိုဒ်တွင် တင်ပေးပါမည်။ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx If you want to […]
Contac Us, Danyawadi
By danyawadi August 25, 20122Comments
မိမိတို့ အနေဖြင့် သမိုင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ဓါတ်ပုံ၊ အထောက်အထား၊ သတင်းအမှန်ကို danyawadi9@gmail.com သို့ပေးပို့ပါက ဤ ဆိုဒ်တွင် တင်ပေးပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx If you want to post any real documents such as History,Articles , photos and News ,Contact here. danyawadi9@gmail.com thanks